Andinin-tsoratra masina 10 hanombohana ny andronao | TOKO VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly Andinin-tsoratra masina 10 hanombohana ny andronao
Andinin-tsoratra masina 10 hanombohana ny andronao
Jona 13, 2021
Androany dia hifandray amin'ny andinin-tsoratra masina 10 izahay hanombohana ny andronao. Tsy misy fomba tsara hanombohana ny andro raha tsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin 'Andriamanitra dia mitondra fahefana ampy izay mba hampandeha tsara ny androntsika. Tadidio fa voarakitra ao amin'ny Baiboly fa feno faharatsiana isan'andro, toy izany koa ny tsofina ao anaty isan'andro. Ny tenin 'Andriamanitra izay marina dia hanampy antsika hanitsy ny androny.
Na mpiasa birao ianao na olona mpandraharaha dia mila teny mety ianao mba hampandeha tsara ny andronao sy tsy hisy loza mety hitranga. Ny tenin'ny Tompo dia fanamafisana sy fampahatsiahivana fa tia antsika Andriamanitra ary miambina antsika Izy. Nanaraka andinin-tsoratra masina 10 azonao ampiasaina foana izahay hanombohana ny andronao.
Salamo 118: 24 «Ity no andro nataon'i Jehovah; Hifaly sy hiravoravo amin'izany isika. ”
Azonao ampiasaina ity faminaniana ity mba haminany mandritra ny andro. Hoy ny soratra masina: manambara zavatra iray, dia ho tanteraka izany. Ambarao fa ny andro no andro nataon'i Jehovah, ka dia hifaly sy hiravoravo amin'izany ianao. Midika izany fa tsy hisy loza hanjo anao amin'ity andro vaovao ity, ary aza mety ho tratran'izany ianao ratsy toe-javatra amin'ny anaran'i Jesosy.
Salamo 88:13 “Fa aminao no itarainako, Tompoko; ary maraina ny vavako dia hisakana anao. ”
Misy zavatra momba ny fiantsoana an'Andriamanitra amin'ny maraina. Ahoana no ilazan'ny bokin'ny Salamo fa hiantso anao aho vao maraina. Tsarovy ny fananarana ao amin'ny soratra masina fa mitady an'Andriamanitra isika rehefa hita Izy, dia tokony hiantso azy isika rehefa akaiky Izy. Midika io vavaka io fa manakaiky ary haingana hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra vao maraina. Vakio ity andinin-tsoratra masina ity, mivavaha amin'Andriamanitra ary minoa fa voavaly ny vavakao.
Salamo 90:14 “Valio izahay amin'ny famindram-ponao; mba hifalianay sy hifalianay amin'ny andro rehetra hiainanay. ”
Izany dia vavaka amin'Andriamanitra hitahy antsika amin'ny famindram-pony. Tsarovy fa ny soratra masina dia milaza fa hamindra fo amin'izay hamindrako fo sy iantrana izay itiavako azy. Ity dia andinin-tenin'ny fananarana fa Andriamanitra dia tokony hitahy antsika amin'ny famindram-po mba hifaliantsika mandritra ny andro. Rehefa miaraka amintsika ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho tapaka ny protokolô ary hianjera amin'ny toerana tsy misy adin-tsaina ny zavatra.
Salamo 5: 3 «Handre ny feoko maraina aho, Tompoko; maraina, hivavaka aminao aho ka hanopy ny masoko. ”
Ity andinin-tsoratra masina ity dia manasongadina bebe kokoa fa mihaino sy mamaly vavaka bebe kokoa Andriamanitra amin'ny maraina. Tsy midika akory izany hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra amin'ny fotoana hafa amin'ny antoandro. Mamaly vavaka foana Andriamanitra. Na izany aza, zava-dehibe ny hampitodihantsika am-bavaka amin'Andriamanitra ny maraina mialoha ny hivoahantsika ny trano.
Salamo 143: 8 "Ampandreneso ahy ny famindram-ponao nony maraina; Ampianaro ahy ny lalana tokony halehako; fa manangana ny fanahiko ho aminao aho. ”
Ny salamo dia vavaka ho an'ny androntsika mba handeha tsara sy hilamina. Mivavaka ho an'ny famindram-pon'Andriamanitra tonga amintsika vao maraina. Ary koa, mila torolàlana isan'andro isika. Rehefa tsy misy fitarihana ny fiainantsika dia tsy azo ihodivirana ny fahadisoana. Ity dia salamo vavaka izay tarihin'Andriamanitra amin'ny tongotr'izay lalana tokony halehantsika.
1 Petera 5: 7 “Apetraho aminy avokoa izay rehetra mampitebiteby anao; fa miahy anao Izy. ”
Raha manahy be loatra ianao, raha feno fanahiana be ny fonao ka tsy fantatrao izay hatao. Ity no andinin-tsoratra masina tsara indrindra hanombohana ny andronao. Matahotra ny hiatrika an'ity lehibena ratsy laza androany ity ve ianao? Na ianao tsy mino fa tsy handeha araka ny kasainao hatao ny andro, tsy misy ahiahy. Nampanantena Andriamanitra fa hikarakara antsika amin'ny famoahana ny ahiahintsika sy ny fanahiantsika rehetra.
Izaia 45: 2 Hialoha anao aho, ary hamboariko ny mahitsy lalana; Hotorotoroiko ny vavahady varahina, ary hotapahiko ny hidy vy.
Tsy mila miahiahy ianao. Fampanantenan'Andriamanitra io. Nampanantena ny handeha eo alohanao isan'andro izy ary hanatsara ny toerana avo. Midika izany fa handeha eo alohanao ny herin 'Andriamanitra Tsitoha ary hamaha ny olana rehetra na ny olana mety hitranga aminao eny an-dalana. Mila mandalina an'io andinin-tsoratra masina io fotsiny ianao amin'ny finoana ao am-ponao fa tahaka ny nanoratana azy no hatao.
Ny varavarana vy rehetra izay nakatona hamely anao hampihemotra ny fitahianao dia ho vaky ny herin'Andriamanitra Tsitoha.
Filipiana 4:19 Ary Andriamanitro hamatsy izay rehetra ilainao amin'ny haren'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy.
Ity dia soratra masina manome toky fa hanome izay rehetra ilaintsika Andriamanitra. Ny haren'Andriamanitra Ray dia tsy azo hamafisina. Ny soratra masina dia milaza araka ny haren'ny voninahiny amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy. Midika izany fa ny tsy fahampiana sy ny filana dia tsy ho anjarantsika isan'andro amin'ny fiainantsika.
Jakôba 1: 5 «Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra, Izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsa; dia homena izy.
Ho an'ny isan'andro dia mila fahendrena ambaratonga iray isika handehanana amin'ny fiainana. Tsy mahagaga raha mananatra antsika ny soratra masina fa raha tsy manam-pahendrena isika dia tokony hangataka amin'Andriamanitra manome malala sy tsy misy kilema. Ny fahendren'Andriamanitra no hampianatra anao ny fomba hamaliana ny resaka rehetra izay hataonao mandritra ny andro.
Ny fahendren'Andriamanitra dia hanampy anao hamaha ireo toe-javatra sarotra toa tsy misy dikany.
Jeremia 29:11 Fa Izaho mahalala ny hevitra kasaiko hatao aminao, hoy Jehovah, Izay mikasa ny hampandroso anao, fa tsy ny hampijaly anao,
Ampiasao ity ampahan'ny soratra masina ity hitakiana ny fanambinana ho an'ny andro. Nilaza izy fa ny tanjony ho antsika dia ny hambinina fa tsy hanisy ratsy antsika. Midika izany fa ny loza rehetra amin'ny alehantsika dia hovonoin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy.
Andininy ao amin'ny Baiboly
andinin-tsoratra masina hanombohana ny andronao
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo
Next lahatsoratraFomba 5 hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady amin'ny fanambadiana
Elvira Loor 23 Jolay 2021 Amin'ny 4:08 maraina
Vavaka ho an'ny taona vaovao 2021
Novambra 5, 2020
Aogositra 21, 2019
Torohevitra 18 mahery amin'ny vavaka amin'ny alina